Ampidiro ao anaty PDF ny sary: ​​solony mba hanaovany azy mora foana | Famoronana an-tserasera
Alao an-tsaina hoe namorona PDF tonga lafatra ianao ho an'ny mpanjifanao na ho an'ny tetikasanao. Napetrakao tamin'ny toerana tokony hisy azy ny zava-drehetra ary nomenao hitahiry izany. Fa rehefa hita fa hodinihinao io dia tsapanao fa hadinonao ny mametraka sary izay tena manandanja. Ary izao rehefa mitady hanova ny PDF ianao dia hitanao fa tsy afaka. Ahoana ampidiro ao anaty pdf ny sary nefa tsy manana ny original?
Milamina aloha. Misy ny vahaolana amin'ity olana mahazo anao ity ary aza matahotra ianao. Ankehitriny dia ara-dalàna raha very ny antontan-taratasy tany am-boalohany, izay mazàna dia doka; Sarotra kokoa ny miasa miaraka amin'ny PDF satria tsy azon'ny ankamaroan'ny mpanova PDF izy io. Raha ny marina, amin'ny programa manokana ho an'ny PDF ihany no ahafahanao manana izany fahafaha-manao izany. Saingy misy bebe kokoa.
1 Ahoana ny fampidirana sary ao anaty PDF misy safidy hafa
1.1 Ampidiro ao anaty pdf ny sary: ​​Adobe Acrobat Pro DC
1.2 Ny fika hampidirana sary ao anaty pdf raha manana Mac ianao
1.3 Mampiasa programa fanovana PDF
1.4 Fandaharana an-tserasera hanovana PDF
1.5 Mampiasà rindranasa iray hanovana ireo PDF anao
Ahoana ny fampidirana sary ao anaty PDF misy safidy hafa
Rehefa mitady fampahalalana hamahana ny olanao izahay dia hitanay fa, ho mampiditra sary ao anaty PDF misy safidy maromaro. Tsy hoe manana Adobe Acrobat fotsiny ianao, fa misy koa hafa toy ny tonian-dahatsoratra PDF an-tserasera, pejy web manampy anao hanao izany, na amin'ny raharaha Mac dia misy fika kely ananany.
Noho izany, hanome safidy anao izahay hahafahanao misafidy ny tsara indrindra amin'ny raharahanao.
Ampidiro ao anaty pdf ny sary: ​​Adobe Acrobat Pro DC
Manomboka amin'ny safidy tsy takatry ny vidin'ny rehetra izahay. Ary ilay programa dia tsy maimaimpoana. Mila manana famandrihana karama ianao raha hampiasa azy. Mazava ho azy, afaka "misoloky" ianao ary raha manolotra fisoratana anarana sy hametraka andrana maimaimpoana mandritra ny 7 andro dia azonao atao amin'ny kaonty iray, miasa ny pdf hamahana ilay olana ary avy eo tsy mandoa vola bebe kokoa.
Raha izao indray no mitranga aminao, na mandroaka mailaka hafa ianao, na mety ho hitanao fa amin'ny farany dia mila mandoa ianao, na dia iray volana aza ...
Raha vantany vao azonao izany, mila manokatra ny rakitra PDF ao amin'ny Adobe Acrobat DC ianao. Mandehana any amin'ny Tools eo an-tampon'ny efijery ary avy eo dia manondro "Manova lahatsoratra sy sary ao anaty rakitra PDF." Io dia hahafahanao manampy ny manampy ireo sary izay hadinonao, fa koa mandefa lahatsoratra.
Ny fanindriana ny bokotra «Add» dia hanome anao safidy hahitana izay sary tianao ampidirina. Manondro azy ianao ary kitiho ny toerana tianao ampidirina ilay sary. Azonao atao ny manova ny habeny, ary koa manodinkodina, manodina na manangona azy raha ilaina.
Ny fanindriana Control + S dia hitahiry ny fanovana ao amin'ny PDF anananao. Ary hijanona ihany ny mahita ny valiny farany. Mamporisika anao izahay tsy hanidy ny PDF mandra-pandinihanao azy, ka raha mila manova bebe kokoa ianao dia efa nosokafanao.
Ny fika hampidirana sary ao anaty pdf raha manana Mac ianao
Raha toa ka Mac ny solosainao dia tokony ho fantatrao fa misy fika hampidirana sary ao anaty pdf. Miorina amin'ny Preview fitaovana izay entin'ny rafitra.
Mba hanaovana izany dia araho ny dingana etsy ambany:
Sokafy ny PDF misy Preview (bokotra eo ankavanana, Sokafy amin'ny… / Preview).
Rehefa misokatra ny antontan-taratasy dia kitiho ny File / Export. Ny zavatra hataony dia ny mamadika ny PDF ho karazana endrika fisie hafa. Amin'ity tranga ity, tsindrio PNG. Omeo mitsitsy.
Akatona ny fisie raha tsy manidy ny programa mihitsy.
Ankehitriny, sokafy ny sary ilainao ampidirina ao amin'ny PDF miaraka amin'ny Preview.
Tsindrio Command + A raha hisafidy ny sary iray manontolo ary tsindrio Command + C handika azy.
Sokafy ny rakitra naondrana avy teo alohan'ny Preview, izay vita amin'ny PNG.
Kitiho ny Command + P hametahana ny sary. Azonao atao ny misintona azy hametraka azy amin'ny toerana ilainao ao amin'ny PDF. Ary azonao atao aza ny manova ny haben'ny sary.
Farany, mandehana any amin'ny File / Export toy ny PDF.
Ka ho voavaha izany, na dia sary tsy mandeha eo anelanelan'ny lahatsoratra fotsiny izany, satria rehefa avadinao ho PNG izy dia miasa miaraka amin'ny sary ny zavatra ataonao ary tsy azonao atao ny manitsy ny lahatsoratra.
Mampiasa programa fanovana PDF
Tsy ny Adobe Acrobat irery no programa azonao ampiasaina hanovana PDFMisy safidy maro kokoa tokony hodinihina. Ny zava-mitranga dia izy no manome valiny tsara indrindra ary tsy manala na inona na inona ao amin'ilay rakitra izy. Fa raha hanitsy azy kely fotsiny ianao dia maro ny programa. Ohatra, manana ApowerPDF ianao.
Izy io dia programa izay ahafahanao mampiditra sary amin'ny PDF mora foana. Raha ny marina dia azonao atao ihany koa ny mamerina mametaka ilay lahatsoratra, mamafa, manampy vaovao ... Ny olana fotsiny amin'izany dia, toa ny programa "ofisialy", voaloa izy io, na dia manana kinova an-tserasera maimaimpoana aza ianao.
Fandaharana an-tserasera hanovana PDF
Fomba iray hafa hampidirana sary ao anaty PDF ny alàlan'ny pejy web sy programa fanovana PDF an-tserasera. Betsaka ny manandrana, na dia, araka ny lazainay aminareo aza, dia efa niresaka momba ny fampidirana ny antontan-taratasinao ho an'ny mpizara iray izay very ny fifehezana, ary midika izany fa tsy fantatrao izay ataon'izy ireo amin'izany. Fa raha tsy manana olana amin'izany ianao, ny sasany izay atolotray dia:
LightPDF. Mpanonta an-tserasera maimaim-poana hanovana PDF amin'ny endrika hafa. Io dia ahafahanao manova ny PDF ho doka ary afaka hiara-hiasa aminy amin'ny solosainao ary hanampy izay tsy hitanao.
PDF Pro. Fitaovana an-tserasera hafa koa ity. Izy io dia ahafahanao manampy lahatsoratra sy sary ao amin'ny PDF anao ary avy eo ampidina (na manonta).
PDF Buddy. Hangataka anao hisoratra anarana hampiasa ilay fitaovana izy io, ary antontan-taratasy telo isam-bolana ihany no azonao atao.
SmallPDF. Fantatra ity tranonkala ity, indrindra fa mpanova. Fa misy koa editor PDF izay ahafahanao mampiditra sary ao anaty PDF. Mazava ho azy, mandritra ny fotoana voafetra ihany no azonao ampiasana azy; dia mila mpampiasa Pro ianao.
Mampiasà rindranasa iray hanovana ireo PDF anao
Ary raha ianao dia iray amin'ireo mampiasa finday na takelaka hiasa, ary mila manova ny pdf ao anatiny ianao, dia azonao atao ny mahazo ilay Fampiharana PDF editor. Maimaimpoana, ao amin'ny Android (ao amin'ny Google Play) io ary azonao atao ny manitsy, manisy sonia PDF, manoratra ao… ary, mazava ho azy, ampidiro ao anaty PDF ny sary.
Araka ny hitanao dia misy safidy maromaro ka, raha misavoritaka ianao ary mila manova PDF hanisahana sary dia tsy mila miahiahy ianao fa misy ny vahaolana ka tsy mila mamerina ny asanao rehetra ianao ( na atsipazo ny sary).
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tutorials » Ampidiro amin'ny PDF ny sary